भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाः मन्त्री अर्याल (अन्तरवार्ता) « Dainiki
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने गरी थप व्यवस्थित बनाएको छ । २०७४ साउन २६ गतेबाट रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय तहले गैरकृषि भनी सिफारिस गरेको जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नपर्ने गरी कित्ताकाट खुलाएको हो । यस निर्णयबाट सरकारको शहरी विकासका आयोजनालाई भने कित्ताकाटमा कुनै रोक लगाएको छैन । कित्ताकाट रोकिएको भन्दै नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कित्ताबाट रोकिँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेटिङमा गलत धन्दा मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर कित्ताकाट खुलाएको छ । यसै विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग गरिएको कुराकानीः
सरलीकृत फारम लागू भए पनि मालपोत कार्यालयमा अहिले पनि बिचौलीयाहरु नै हावी भएका देखिन्छन ? प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउन किन सयन्त्र बन्न नसकेको हो ?
भूमि व्यवस्था विभागमा अब हटलाइनको व्यवस्था हुँदैछ । सिधै फोन गरेर जानकारी गराउने प्रणालीको विकास हुन्छ । अब देशभरकै कार्यालयहरुमा हुने गलत काम रोकिन्छ । विभागमा सुरु भएपछि हामी सिधै मन्त्रालयबाट नै हटलाइन सेवामार्फत जनताको गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्छौं । (नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी सान्दर्भिक भएकाले साभार गरिएको)
प्रकाशित मिति : ३० पुष २०७५, सोमबार ०९:४८
नेपाल प्रहरीको जागिरप्रति निराशा बढ्दै, दैनिक ७ जनाले जागिर छाड्न थाले
७ माघ, काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीको जागिरप्रति निराशा बढ्न थालेको छ । अाैसतमा दैनिक सात
खुशी र सफलताका लागि बैंकर ज्ञवालीका दश शुत्र: ‘बोल्दा विचार गरौँ, गाली कसैलाई नगरौँ’
३ माघ, काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली अन्य बैंकका अधिकृतहरूको